मंगलबार काठमाडौं उपत्यकामा थपिए ३८९३ संक्रमित, अन्य कुन जिल्लामा कति ? - Everest Dainik - News from Nepal
मंगलबार काठमाडौं उपत्यकामा थपिए ३८९३ संक्रमित, अन्य कुन जिल्लामा कति ?
काठमाडौं । आज काठमाडौं उपत्यकामा ३८९३ संक्रमित थपिएका छन् ।
आज काठमाडौंमा २७७९, ललितपुरमा ६०१ र भक्तपुरमा ५१३ संक्रमित थपिएका हुन् ।
काठमाडौं उपत्यकामापछि रुपन्देही, कास्की, मोरङ, चितवनमा बढी संक्रमित थपिएका छन् ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार मंगलबार प्रदेश १ मा ६०७, प्रदेश २ मा ४३६, बागमतीमा ४५७८, गण्डकीमा ४१८, लुम्बिनीमा १००९, कर्णालीमा २१३ र सुदूरपश्चिममा ३२६ संक्रमित थपिएका छन् ।
मंगलबार देशभर ७६६० संक्रमित थपिँदा ५५ जनाको मृत्यु भएको छ ।
अन्य कुन जिल्लामा कति ?